ချန်ချန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိပ်ဆုံးမှစ၍။ ချီမော၏ မြို့တော် ချန်ချန်၏ မြင်ကွင်း၊ ချန်ချန်၏ တံတိုင်း၊ ချန်ချန်၏ ကနုတ်အသေးစိတ်၊ စစ်သူရဲတို့၏ အသေးစိတ် ပြကွက်၊ ချန်ချန်ရှိ ငှက်ကြီးဝံပို၊ ချန်ချန် ပုံစံငယ်၊ ချန်ချန်ရှိ တံတိုင်း
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ ပီရူးနိုင်ငံ
ဒေသ** လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံ
ချန်ချန် သည် တောင်အမေရိကတိုက် တွင် ကိုလံဘီယာခေတ်မတိုင်မီ အချိန်က အကြီးဆုံးမြို့တော် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ပီရူးနိုင်ငံ ထရူဂျီလိုမြို့၏ အနောက်ဘက် ၅ ကီလိုမီတာ (၃.၁ မိုင်) အကွာရှိ လာ လီဘာတက်ဒ်ဒေသတွင် တည်ရှိသော ရှေးဟောင်းသုတေသနနယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ချန်ချန်သည် မိုရှေးတောင်ကြား၏ အဝတွင် တည်ရှိပြီး  ၉၀၀ ခုနှစ်မှ ၁၄၇၀ ခုနှစ် အထိ တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းဝင် ချီမော အင်ပိုင်ယာ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး  ထို့နောက်တွင် ချီမောအင်ပိုင်ယာအား အင်ကာ အင်ပိုင်ယာမှ အနိုင်ယူ သိမ်းပိုက်၍ ၎င်းတို့ လက်အောက်သို့ သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ ချီမော သည် ပီရူးကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် အေဒီ ၁၄၀၀ ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့သော ချီမူး ယဉ်ကျေးမှုမှ ပေါ်ထွန်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ချန်ချန်သည် ပီရူးနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ ကမ်းရိုးတန်း သဲကန္တာရ၏ မိုးခေါင်ရေရှားဒေသတွင် ရှိသည်။  ထိုဒေသတွင် မိုးမရွာသဖြင့် ချန်ချန်ရှိ ဆားငန်ရေ မဟုတ်သော ရေ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ အင်န်ဒီးစ်တောင်တန်းမှ ကျဆင်းလာသော ရေတို့ကို သယ်ဆောင်လာသော မြစ်များ ဖြစ်သည်။ ထိုရေများကြောင့် ကုန်းမြေနှင့် ရေတို့ကို ဆည်မြောင်းစနစ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။
ချန်ချန်မြို့သည် ၂၀ စတုရန်းကီလိုမီတာမျှ ကျယ်ဝန်းပြီး သိပ်သည်းသော မြို့ပြဒေသမှာ ၆ စတုရန်းကီလိုမီတာမျှ ရှိကာ ၎င်းတွင် ခမ်းနားသော "စယူဒါဒီလာ" ရှိသည်။ "စယူဒါဒီလာ" သည် ကြီးမားသော ဗိသုကာပညာဆိုင်ရာ လက်ရာမြောက် အဆောက်အဦး ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ပလာဇာများ၊ စတိုခန်းများ နှင့် တော်ဝင်မိသားစုအတွက် မြှုပ်နှံရန်နေရာများ ပါဝင်သည်။ ထို "စယူဒါဒီလာ" များ၏ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုကြောင့် တော်ဝင်မျိုးနွယ်များနှင့် ဆက်စပ်နေမည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ချန်ချန်၏ နိမ့်ပါးသော အမျိုးအနွယ်များ အတွက် အိမ်များမှာ သေးငယ်ပြီး ပုံစံမမှန်ဘဲ ကျပ်သိပ်နေသော အခန်းများ ဖြစ်သည်။ နိမ့်ပါးသော အမျိုးအနွယ်များမှာ များသောအားဖြင့် အနုပညာသည်များ ဖြစ်ပြီး အင်ပိုင်ယာအတွင်း ၎င်းတို့၏ အလုပ်မှာ လက်မှုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန် ဖြစ်သဖြင့် ထိုအခန်းငယ်များကို အလုပ်ရုံများအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ 
↑ Carter၊ Benjamin (2008-01-01)။ Technology, Society and Change: Shell Artifact Production Among the Manteno (A.D. 800--1532) of Coastal Ecuador။ ISBN 9780549646341။ [လင့်ခ်သေ]
↑ The Smithonian Staff (March 2010)၊ "10 Must-See Endangered Cultural Treasures"၊ Smithsonian၊ 39 (12): 35၊ 2020-04-22 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 2020-07-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး - Chan Chan, Peru, End of an Empire by Bruce Hathaway
↑ Moseley, Michael (24 January 1975). "Chan Chan: Andean Alternative of the Preindustrial City". Science 187 (4173): 219–225. doi:10.1126/science.187.4173.219. PMID 17838775. Bibcode: 1975Sci...187..219M.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Smailes, Richard (March 2011). "Building Chan Chan: A Project Management Perspective". Latin American Antiquity 22 (1): 37–63. doi:10.7183/1045-6635.22.1.37.
↑ Rowe, John (1948). "The Kingdom of Chimor". Acta Americana.
↑ D'Altroy၊ Terence (2002)။ The Incas။ Malden, MA: Blackwell Publishing။ pp. 41။ ISBN 978-0-631-17677-0။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ Moore၊ Jerry (2002)။ Encyclopedia of Prehistory။ Human Relations Area Files, Inc.။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချန်ချန်&oldid=716249" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။